सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 फेरि एकपटक फ्रन्ट मा आफ्नो फिंगरप्रिटर रिडर हुन सक्छ ग्याजेट समाचार
यदि त्यहाँ एक चीज छ जुन भर्खर आलोचना गरिएको छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S8 र S8 + तपाईंको फिंगरप्रिन्ट रिडरको स्थिति हो। कोरियालीले यो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरको लागि नयाँ स्थानमा शर्त लगाउने निर्णय गरे। र अन्तिम निर्णय यसलाई पछाडि राख्नु थियो। यद्यपि यस क्षेत्रका अन्य टर्मिनलमा अवस्था सामान्य छैन। त्यो भनेको क्यामेरा मुनि हो, बरु सानो पाठकको लागि रोज्नुहोस् र क्यामेरा सेन्सरको छेउमा राख्नुहोस्.
यो सहज छैन र क्यामेराको अप्टिक्स अप्ठ्यारो पार्ने समस्याहरू मध्ये एक हो जुन प्रयोगकर्ताहरूले फेला पारेका छन्। र स्पष्ट रूपमा यी गुनासाहरूको कार्यान्वयन भएको छ र कम्पनीले यसको अर्को फ्ल्यागशिपहरूको नोट लिएको छ: सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 र सैमसंग ग्यालेक्सी S9 +.
यो ज्ञात भएको छ, कोरियाली फिर्ता जाने निर्णय गरेको थियो र अगाडि फिंगरप्रिन्ट रिडर राखेर फेरि शर्त लगाउन। अब, यो हामीले अहिले सम्म पढेका पाठकहरू जस्तो हुने छैन, तर यो नयाँ मोडेल गत पुस्ताहरूको भन्दा सानो - र छिटो हुनेछ। तर सावधान रहनुहोस्, किनकि त्यस बेलादेखि SlashGear उनीहरूले चेतावनी पनि दिन्छ कि यो मोडलले कम्पनीको आलोचनाको नयाँ लहरमा पुर्‍याउन सक्छ।
यदि हामी यस चुहावटमा ध्यान दिन्छौं भने, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 र S9 + हप्ता पहिले संकेत गरीएको पर्दा अन्तर्गत पाठक बोक्ने छैन; यस्तो देखिन्छ कि सामसुले यस नयाँ पुस्ताको स्मार्टफोनको लागि समयमै आगमन नगरेको र स्क्रिनको तलमा "टापु" छोड्दा स्क्रिनको भागमा आक्रमण गर्ने मोडेल लागू गर्नमा शर्त लगाउँछ। त्यो हो, के हुन्छ आवश्यक फोन वा आईफोन एक्स मा।
हामीलाई याद गर्नुहोस् कि भर्खरको जेनरेशन मोबाइलहरू मोडेलहरू हुन् जुन शारीरिक बटनहरू छैनन् र फ्रेमहरूको अभाव छ। त्यसो भए यदि यो अफवाह सही छ, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 र S9 + स्क्रीनमा छवि क्रप हुन सक्छ यो फिंगरप्रिन्ट रिडर द्वारा।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 फेरि एकपटक फ्रन्ट मा आफ्नो फिंगरप्रिटर रिडर हुन सक्छ
AOC ले सबै बजेटहरूको लागि .31,5१..XNUMX इन्चको मोनिटर प्रस्तुत गर्दछ